Mụ nwanyị Bollywood Kachasị Mma | Njem zuru oke
Foto | Republic
Bollywood bụ okwu enyere na 70s na ụlọ ọrụ ihe nkiri na India, nke dị na Bombay na asụsụ e ji eme ihe bụ Hindi. Okwu a sitere na ngwakọta dị n'etiti aha Bombay na Hollywood, mecca nke sinima America dị na Los Angeles.
Ihe nkiri Bollywood bụ ụwa ama ama maka nọmba egwu ha dị egwu, juputara na choreographies mara mma nke ndị na-eme ihe nkiri na-agba egwu na egwu ọdịnala agwakọtara na Western pop. Nakwa maka ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-eme ihe nkiri, ndị na-eweta nnukwu nkà na ịma mma, yana ọtụtụ nde ndị na-eso ụzọ n'ime mba ha na karịa ókèala ya.
N'oge a, anyị na-eme nyocha site na ụfọdụ ụmụ nwanyị kachasị mma na Bollywood ndị sonyeworo n'ọtụtụ fim na usoro telivishọn. Ole ndị kacha mara amara?
Aishwarya Rai bụ nwanyị kachasị nwee mmetụta na India, nwere ọnụnọ na ugwu kacha ukwuu na mba ụwa. Dị ka ụmụ nwanyị ndị India ndị ọzọ, Rai jere ozi dị ka ihe nlere ma kpuwe ya Miss World na 1994.
Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ụwa nke sinima hụrụ ya wee mee ya mbụ na ngwụsị afọ ndị 90. Ọ na-etinye aka ugboro ugboro na mmemme dị iche iche nke India, na-enweta ọtụtụ onyinye sitere na Indian Film Academy maka ihe nkiri dịka "Hum Dil De Chuke Sanam" ( 1999) ya na Salman Khan na “Devdas” (2002) ebe ya na Shahrukh Khan keere ihe ndia.
N’uwa nile, onye nwanyị India bụ Aishwarya Rai esonyewokwa na ọtụtụ ihe nkiri ọkachasị na United States. Ihe nkiri mbụ ya na mba ọzọ bụ "Agbamakwụkwọ na Mbunobi" (2004), mmegharị ntụrụndụ nke akwụkwọ akụkọ Aust Austen "Mpako na ajọ mbunobi."
Mgbe e mesịrị, o sonyere na ihe nkiri akụkọ ihe mere eme na onye nkiri Britain bụ Colin Firth nke a kpọrọ "Njikọ Ikpeazụ" (2007). Ihe nkiri ya ndị ọzọ ama ama na mba ofesi bụ "The Pink Panther 2" (2009), ihe esochiri "The Pink Panther." Mgbe ihe ndị a gasịrị na Hollywood, onye omeebe India laghachiri ọrụ na obodo ya.
Na mgbakwunye, ọ emeela ọtụtụ nkwado dị ka ihe mgbasa ozi maka ụdị ejiji na ụdị ịchọ mma.. Ọ pụtakwara n'ọtụtụ mkpuchi nke akwụkwọ akụkọ ejiji na-ekpori onwe ya eze nke Bollywood.
Foto | Outlook India
Onye omeegwu Danish nke agbụrụ India bụ otu n'ime ụmụ nwanyị kachasị mma na Bollywood taa na otu n'ime ihe kachasị mma na 56,2 nde ụmụazụ na Instagram.
Ọ banyere ụwa nke sinima ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mberede mgbe ọ gbasịrị ogologo oge dị ka ihe nlereanya nke mgbasa ozi mgbasa ozi maka ụdị azụmahịa kachasị mma na India. Ozugbo ọ ghọrọ otu n'ime ihu ndị kachasị ewu ewu na nke kachasị ewu ewu na mba ahụ wee mee ka ọ banye na ejiji ụwa site na isonye dị ka onye nnọchi anya mba maka ọla mara mma na ụdị ịchọ mma.
Mgbe hasechara vidio egwu maka "Naam Hai Tera" nke Himesh Reshammy, ndị isi ahụ lebara ya anya, wee kwuo ịpụta na ụwa nkiri sinima bịakwutere ya ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na Deepika enweghị ọtụtụ ahụmahụ na ụlọ ọrụ a, chọrọ ịkwalite onwe ya ma debanye aha na ụlọ akwụkwọ mmuta na-eme ihe nkiri ebe ọ na-aga klas iji melite nkà ya n'ihu ese foto.
O mere ya onye mbu dika onye na-eme ihe nkiri na ihe omimi nke ihunanya "Aishwarya" (2006) ihe nkiri a buru ibu na ulo oru igbe. Ihe nkiri vidio nke ọ nwetara nlezianya nyocha na Bollywood bụ "Mgbe Otu Ndụ Dị Obere" (2007). Maka arụmọrụ ya na ya, ọ natara Filmfare nke Indian Film Award na nhọpụta izizi nke onye omee kachasị mma.
Mgbe ahụ, o mere fim ụfọdụ na-enweghị nnukwu mkpa ruo na 2010 ịga nke ọma kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ya ọzọ na ntochi "Housefull" site Sadij Khan. Na 2015, Deepika so onye omeebe Priyanka Chopra na ihe nkiri akụkọ ihe mere eme "Bajirao na Mastani", nke ghọrọ ihe nkiri Indian nke anọ kachasị elu.
Mba ụwa, onye omeebe ahụ rụkwara ọrụ na Hollywood na 2017 na ihe nkiri "Three X: World Domination" ebe ya na Vin Diesel kesara ihuenyo ahụ.
Foto | Ewu ewu Mexico Roy Rochlin
Priyanka Chopra bụ otu n'ime ndị na-eme ihe nkiri Bollywood kacha mma na otu n'ime ndị kachasị ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya. O bilitere na ama mba ụwa na usoro American "Quantico" (2015), ebe ọ na-arụ ọrụ onye ọrụ FBI nke ga-achọpụta onye edemede nke mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na Grand Central Station mgbe a na-enyo ya enyo. Na Hollywood o mekwarala ihe nkiri ndị ọzọ dịka "Baywatch: Los Vigilantes De La Playa" (2017), "Superniños" (2020) na "Tigre Blanco" (2021).
Agbanyeghị, ọ sonyeburu na ọtụtụ ihe nkiri Bollywood dị ka "Don" (2006) ", onye na-atọ ụtọ ihe nkiri na Shah Rukh Khan dị ka onye otu; "Krrish" (2006), nnukwu akụkọ banyere Hrithik Roshan; "Ejiji" (2008), ihe nkiri esitere na ụwa nke ịme ngosi uwe na ejiji; "Kaminey" (2009), ihe nkiri nkiri na omee Shahid Kapoor; "Barfi!" (2012), “Gunday” (2014) ma ọ bụ “Mary Kom” (2014), ihe nkiri akụkọ ndụ banyere ogbe olimpik a si Manipur.
Priyanka Chopra bụkwa onye ama ama a ma ama ka ọ meriri aha Miss World n'afọ 2000, bụ onye nke ise nke Indian emere ka a kpọọ ya onye mmeri na asọmpi ịma mma a ama ama.
Ọ nwere ọtụtụ onyinye na otuto ya na Instagram ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 62,9.
Foto | Masala!
Onye na-eme ihe nkiri Kareena Kapoor si n'ezinụlọ ndị na-ese ihe (nna nna ya, nna ya na nwanne ya nwanyị nke okenye bụkwa ndị na-eme ihe nkiri) ya mere talent na-agbafe ya.
Ọ malitere ịrụ ọrụ n'ihu igwefoto mgbe ọ dị obere, na-apụta na mgbasa ozi telivishọn dị iche iche. Banyere sinima ahụ, ọ mere ihe izizi na 2000 na ihe nkiri "Refugee", nke mere ka ndị mmadụ mara ya na ndị mgbasa ozi ọpụrụiche na onyinye mbụ ya bụ Filmfare maka ọrụ izizi nwanyị kachasị mma.
N'afọ sochirinụ ọ sonyere na ihe nkiri "Kabhi Khushi Kabhie Gham" nke ghọrọ fim kachasị elu na India na ahịa mba ụwa.
N'afọ ndị sochirinụ iji zere ịdị na-eme nduru na ọrụ ụfọdụ, onye na-eme ihe nkiri họọrọ ịnakwere ọrụ ndị ọzọ na-achọsi ike, si otú a na-eju ya anya na ụdị ọrụ ya Na ihe nkiri dịka "Chameli" (2004) ebe ọ gbara akwụna nke o ji turu ugo ya nke abụọ Filmfare Award for Best Special Performance na n'ihe nkiri dika "Dev" (2004) na "Omkara" (2006) nke o jiri merie abuo ihe ndị na-akatọ onyinye maka onyinye kacha mma.
Ihe ọchị "Jab We Met" (2007) nke Imtiaz Ali duziri wee nweta Kapoor onyinye kacha mma maka Filmfare. Kemgbe ahụ, ọ nweela ọrụ dị ogologo ma nwee ọganiihu ma nweta ihu ọma nke ọha na eze, yabụ ịbụ otu n'ime ndị inyom Bollywood kacha mma n'oge a nwere ihe karịrị nde mmadụ isii na-eso ụzọ na Instagram.
Foto | Na-ewu ewu India
Bipasha Basu bụ nwanyị ndị India ama ama na a ezi Indian celluloid diva onye ya na talent na ịma mma jisiri gafere ókè ya. Ọ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 9 na Instagram.
Dika ndi nwanyi ndi Bollywood ndi ozo, Bipasha mere uzo mbu n’ime uwa nke ejiji wee bido oru oma ya na ulo oru a n’okorobia, na iri na asaa. N’afọ ndị 17, ọ meriri Supermodel nke asọmpi Cinthol Godrej na asọmpi a na-ewu ewu nke mba ụwa bụ Ford supermodel. Nke a mere ka o kwe ya omume ịrụ ọrụ dị ka ihe nlereanya na New York, ebe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ maka ụlọ ọrụ Ford, wee pụta na ihe karịrị 90 nke akwụkwọ akụkọ ejiji.
Dị ka onye na-eme ihe nkiri, ọ na-eme ihe nkiri mbụ na nnukwu ihe nkiri na ihe nkiri "Ajnabee" (2001), nke mere ka ọ nweta ihe nrite nke Filmfare maka nke kachasị mma nwanyị. Otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, ihe ịga nke ọma azụmaahịa mbụ ya nwere na ihe nkiri egwu ahụ bụ "Raaz" (2002) bụ nke a họpụtara ya maka ihe nrite nke Filmfare n'ụdị ezigbo nwanyị na-eme ihe nkiri.
Ka oge na-aga, ọ sonyekwara na fim ndị ọzọ na-enye nnukwu ego na India dịka comedies "No Entry" (2005), "Phir Hera Pheri" (2006) na "All the Best: Fun Begins" (2009).
N'ime afọ ndị ahụ ọ natakwara otuto dị ukwuu maka arụmọrụ ya na fim ndị dị egwu Aatma (2013), Ihe okike 3D (2014) na Alone (2015) na ihe ọchị ọchị Bachna Ae Haseeno (2008). Fọdụ ọrụ ya kachasị ọhụrụ na Bollywood bụ Humshakals (2014) na Creature (2014).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Mụ nwanyị Bollywood kacha mma
Ee Aishwaria mara mma ma anụrụ m nke ahụ mana maka m Kajol ka mara mma na nwanyị kacha mma Indu ...
Ọfọn Aishwaria mara mma mana Kajol mara mma ma nwee ọgụgụ isi
ọ bụrụ na m na-eche otu ihe
Kajol karịrị gị, mana ekwesighi ịmụ gị ọzọ ebe ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-adị mma, ha ha, kedụ ụdị ọchị, ị naghị eche?
kajol kachasị mma nke rosebush
Achọghị m ka m ghara iru eru onye ọ bụla ma ọ bụ tụnyere n'ihi na ọ dịghị ntụnyere ga-ekwe omume. Kajol dị ka onye na-eme ihe nkiri dị egwu n'ihi na ọ na-eme ka ihe odide niile ọ na-arụ na-ekwenye ekwenye na otu o si bụrụ nwanyị nke anụ ahụ na ọbara, ọ ga-eme ka ị ghara ịba uru
kajol bụ ihe kasị mma omee m hụrụ n'anya ịhụ ya na mbụ m ịhụnanya na sharuck khan bụ egwu
dị m mma kajol bụ ihe kasị mma nke hindu sinima na mara mma m hụrụ n'anya ya nkiri ịhụnanya megide oké na mkpa tkm kajol ị bụ ọkacha mmasị m ok
Aishwarya Rai bụ ọkacha mmasị m nwanyị na India niile
Ọ ga-amasị m ịbụ onye na-eme ihe nkiri Bollywood dị ka ya
Zaghachi ka swarna
Bombay nke kacha mma !!
enweghị a doro anya na e nweghị ebe nke ntụnyere n'ihi na nkà nke kajol na ịma mma ya dịghị onye karịrị ya ma ọ bụ m ụwa onye na-ghọtara
KAJOL Kachasị mma ………… KPỌỌ karịa SIIIIIIII
Zaghachi MARISABEL ARACA
KAJOL B MY M AKA NA-AH ACTA MMA NA ỌMA MAKA SHARUKH KHAN HOV M HA n'anya
Mee ka onye ọ bụla mara ma nakwere ya, na naanị Kajol kachasị mma ma ọ bụrụ …… ..
ihe nkiri kajol na sharukan mara ezigbo mma ha na-eme di na nwunye mara mma
ndị mara mma nke ụmụ nwanyị na-eme ihe nkiri bụ kareena kapoor, aishwarya rai, kajol
Kajol bụ nwanyị mara mma nke ukwuu ma ama ama ma jupụta na charisma zuru oke.
Abụ m otu n'ime Fans Kajol, ha na SRK na-emekọ ihe ọnụ
magburu onwe, M hụkwara ihe nkiri Hindu n'anya, ana m enwe mmasị na mmadụ niile
Zaghachi na Seagull
Ha kachasị mma. biputere ọzọ foto na ihe ndekọ gị
nwanyị karọl dijo
kajol bu onye kacha mara mma nmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa enweghi onye dika gi
Zaghachi nye nwanyị karol
Kajol mara ezigbo mma na ezigbo onye na-eme ihe nkiri, na-akpa ọchị, ọ na-agba egwu nke ọma .. ọ bụ ihe kachasị mma!
LINDA KAJOL NKWAZO
Zaghachi ERIKA GUSMAN
KAJOL KA THE BAD ISI N’AGH LE N’ERLỌ OFL H HINDU CINEMA NA CHARISMA NA MFE Ọ B YOUR MA M KWA MADE H YOUR YOU Gị n’anya NA FILMS Gị NA SHARUKH B G REATBREAT.
Zaghachi na KAREN GUSMAN RAMOS
Ọtụtụ na-ekwu na ị kachasị mma n'ihi na ha hụrụ ịma mma nke mpụga gị nke ị na-enweghị ike izochi mana ha na-echefu ịmata etu ị dị n'ezie na mmadụ na nke ahụ bụ ihe dị mkpa, ọ dịghị mma ịhụ ihu elu ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ime dị ka m meworo. You bụ nwanyị kachasị mma na India niile ebe ọ bụ na ị na-eme ya na mmetụta, ihe ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri echefulaworị ... nke ọma, ọtụtụ ekele gị Oriakụ Kajol Devgan, ọtụtụ ihe ịga nke ọma na nke kachasị mma nye gị na ezinụlọ gị , echefula ndị na-amasị gị si n'akụkụ ụwa niile.na ụwa na nke kachasị ihe niile a nwere ntụkwasị obi n'anya ... Ana m atụ anya ụbọchị ị ga-abịa Peru wee nwee ike ịnwe ọ happinessụ nke izute gị n'onwe gị n'ihi na ọ bụrụ e to m, m ga-eme ihe obula m no nani 1 min by your side .. bye ... I hope I can read this message one day .. take care atte miki
Ee n'ezie na ọmarịcha ma n'ụzọ m bụ onye na-anụ ọkụ ọkụ nke ihe nkiri Hindu m nọ na nche maka mmalite nke ndị na-eme ihe nkiri niile dịka Kajol, Ash, Preity, Rani wdg, nke ụmụ nwoke SRK, Roshan, Salman, na N'eziokwu m bụ onye ofufe nke ndị niile na-eme ihe nkiri na ndị inyom m maara ma mara ọtụtụ
Mmadu adi nma ekeresimesi
Zaghachi Eliama Gaviota
Amaghị m ihe ha na-ahụ Kahol mana otu ihe bụ na-atụ uche ụwa na ihe nlereanya n'etiti ihe ndị ọzọ na ihe ọzọ bụ na ha nwere mmasị na ha
gịnị kpatara ha ji enye ha mgbu na fim ha
mana maka m na maka na maka imirikiti ọ bụ naanị aishwarya rai ma ọ bụrụ na atụghị foto na ihe ndị ọzọ
Zaghachi na sandrita
Aswaira bu asQo! 100% KAJOL .. na zi stuviera RANI ga - emeri ihe niile :)!
Ndewo m deere gị akwụkwọ site na Bolivia maka KAJOL bụ nke kachasị mma na ezigbo mma n'ihi na AIS abụghịkwa na ọ dị ezigbo mma na KOQUETA SIIIIIIIIII N IS B ISGHY KWES CR C CAEEEEEEEE Ọ B IFR IT NA Ọ B NOTGH BE KWES BER BE ỌR SHE Ọ KWES THATR THAT NA BU EZI OKWU
oh ee ps and by the way kajol na-eme ezigbo di na nwunye na shahrukh khank
Ha dakọtara nke ọma na ha abụọ bụ ezigbo ndị na-eme ihe nkiri na a ga-amata ya na fim ikpeazụ ha mere ọnụ nke mere ka ha pụọ ​​iche
Kedu aha ụmụ nwanyị na-eme ihe nkiri?
Ndewonu mmadu nile; Maka m, Kajol kachasị mma ọ bụghị naanị n'ihi ịma mma ya, kamakwa n'ihi njirimara ntụgharị ya.Enwere m mmasị ịhụ ya ka ọ na-eme ma n'egwú ndị kwesịrị ịba na sinima.
maka m ha dị ka ndị mara mma ha abụọ na-eme nke ọma na fim maka m ha abụọ mara mma
Zaghachi Maria Grace
onye mara mma bụ kajo na enweghi obi abụọ ray ews mara mma mana ọ nweghị ahụ ọ dị ka mkpisi mana kajol bụ chi nwanyị nwere ihu ahụ na ahụ ọ zuru oke.
Zaghachi na nadeshco
Echere m na ọ dị mma na kajol, bụrụ onye na-eme ihe nkiri kacha mma
nke ọma kajol mara mma na ezigbo onye na-eme ihe nkiri
Kajol mara mma karịa n'ime na n'èzí!
Oké Osimiri MARI dijo
Kacha mma eme ihe nkiri bụ SHARUKHAN NA KAJOL HA mara mma
Ha na-eju anya ma dị ọtụtụ nke ukwuu
Zaghachi MARI MAR
KAJOL Kachasị mma na ihe jọgburu onwe ya nke ihe niile na-anabata, Chineke gọziri unu niile, ọkachasị anya unu
herlinda ìhè dijo
Maka m ha abụọ nwere ikike mana echere m na ihe kacha mma bụ kajol na ihe kachasị amasị m bụ ihu ya
Zaghachi luz herlinda
ọ dị mma ịnwe ndị na-eme ihe nkiri dịka kajol na sharukhan
N'ihi na m kajol nke kachasị mma dịka ihu nke onye na-eme ihe nkiri mara ezigbo mma na m hụrụ fim ya n'anya
Zaghachi maria gomez
okpu martin dijo
olz kajol a bu m onye nnukwu mmasi gi
Zaghachi lucero martin
Ihe mara mma nke na-enwu ebe ọ bụla ọ na-aga na ọkachamara ọkachamara ya bụ ihe na-egosi mmasi na-enweghị ike ịkwụsị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ bụ nwanyị nwere ọgụgụ isi n'ezie, kelee Chukwu maka iziga nwanyị mara mma ma nwee ọgụgụ isi n'ụwa a. Ekele m gị ma ị mara mma dịka ị dị.
hl my name is sara and for me all indu acrisaz are beautiful and love indu fim M hụrụ ha n'anya
Kachasị mma na BOLLYWOOD BA kAJOL, Ọ B A EGO zuru ezu, na ihe mara mma nke ihe niile, AH MANYR MANY M ỌT MANYT I HINDU FILMS NA Ahụghị m nnweta dị ka nke ya na nke eziokwu, ihe nkiri kachasị mma bụ nke SRkAJOL dị ka ezigbo ụzọ. .
Zaghachi ARIS OCHOA
Site na Peru, Kajol bụ onye na-ese ihe nkiri Indu mara mma ma zuru oke, n'ihi na na mgbakwunye na ọ na-abụ abụ ma na-egwu egwu dị egwu bravo Kajol
Zaghachi john velarde
Taa, ahụrụ m PYAAR TO HONA HI THA, ya na Kajol na Ajay, amaghị m ihe m ga-ekwu maka Kajol, ekwuru m mgbe niile na ọ bụ agwa na arụmọrụ, ọ bụ onye na-eme ihe nkiri na agwa ọ bụla dabara na ya, ọ dị nnọọ adọrọ adọrọ, ọhụrụ, mara mma, zuru oke. Ahụla m ọtụtụ fim nke ya na Ajay bụ ezigbo onye na-eme ihe nkiri n'ezie nnukwu di na nwunye SrKAjol, m na-ekwu ya na isi, ọ bụ ICON DIVA QUEEN, enwere m obi abụọ ma ọ siri ike ịchọta onye na-eme ihe nkiri nwere ihe niile dị ka Kajol, enwere m olileanya ịlaghachi ya ka ọ hụ na ihe nkiri ọhụrụ ma enwere m nnukwu mmasị maka ya ……
Site Iquitos-Peru Kajol kacha mma. Anọ m eso ya kemgbe afọ 20 kemgbe m hụrụ ihe nkiri ya kuch kuch hota hai.